Muqdisho: Gudoomiye cusub la wareegay maamulka degmada qadiimiga ah ee Shangaani – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho: Gudoomiye cusub la wareegay maamulka degmada qadiimiga ah ee Shangaani
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiye cusub ayaa maanta la wareegay maamulka degmada qdiimiga ah ee Shangaani ee magaalada Muqdisho, iyadoo arrintaan qeyb ka tahay isbadel xaga maamulka oo maalmihii lasoo dhaafay uu weday gudoomiyaha gobolka Banaadir Jen. Xasan Muungaab.
Munaasabad ay xilka kulak ala wareegeen guddoomiyaha cusub ee degmada Shangaani iyo gudoomiyihii hore oo ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin ka socotay maamulka Gobolka Benaadir,iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku kunool degmada Shangaani ayaa maanta lagu qabtay Xarunta maamulka degmadaas.
Gudoomiyaha cusub ee degmada Shangaani waxaa loo magacaabay Saciid Cabdiqaadir, iyadoo xilkaa laga qaaday Cali Cumar.
Guddoomiyihii hore ee degmada Shangaani Cali Cumar oo goobta hadal ka jeediyay ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in xilka gudominimada oo ku wareejiyo guddoomiyaha cusub ee degmada Shangaani loo Soo magacaabey.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Shangaani Saciid Cabdiqaadir oo munasaabada ka hadley ayaa sheegay in uu ka shaqeyn doono horumarinta adeegyada guud ee bulshada iyo xoojinta amniga.
Afhayeenka Maamulka Gobalka Banaadir, Cabdibaasid Maxamed Cabdiraxmaan oo ugu dambeyntii munasabada ka hadaley ayaa ugu baaqey bulshada kunool degmada Shangaani iney la shaqeyna maamullka cusub ee degmada loo so magacaabay, isagoo guddoonka cusub kula dar daarmay inay la yimaadaan isbadal muuqdo.
Horay waxaa xilalka looga qaaday inta badan gudoomiyaashii degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoo uu ugu dambeeyey gudoomiyihii degmada Wadajir Axmed Daaci.
Waxaa weli xilalkooda haya 3 gudoomiye degmo oo kaliya, kuwaasoo kala ah: gudoomiyaasha degmooyinka Yaakhshiid, Howlwadaag iyo Wardhiigley.
Dhadhaab: Dabley weerar khasaare geystay ku qaaday shaqaale Qaramada Midoobay
Raysul Wasaare Cabdi Weli oo dhagax dhigay Dugsiga Tababarka Duulimaadka